Search results for "संकटदेखि बचाउनु"
काछाक्‍पा [katsʰak‍pa] ना. थुन्‍ने मान्‍छे (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
कापुबा [kapuba] ना. 1गोठालेashepherd,aherdsman,acowboy
(sem. domains: 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 4.2.1.4 - भेट्‌नु.) 2हेर्ने मान्‍छे (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
काहिङ्‌मेप्‍पा [kahiŋ‌mep‍pa] ना. 1बचाउने वाला savior (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.) 2जीवित पार्ने
पिम्‍मा [pim‍ma] क्रि. 1दगुर्नु to run, to hurry up, to rush
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 1.1.1.3 - ग्रह, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 2कुद्‍नु to scammer, to run, to sprint, to flee, to run away, to escape
3दौडिनु 4भाग्‍नु to flee, to takeaflight, to escape, to take to one's heels, to walk away, to run away, to run away with quick paces
(sem. domains: 4.2.6.3 - ब्‍यायाम, अभ्‍यास.)
हिङ्‌मेट्‌मा [hiŋ‌meʈ‌ma] क्रि. बचाउनु to save, to guard, to rescue, to defend, to protect
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 4.7.5.4 - बचाउनु.)